Inkscape 1.0.2 dia miaraka amin'ny fanatsarana ny fitoniana, ny fanamboarana bibikely ary bebe kokoa | Ubunlog
Inkscape 1.0.2 dia miaraka amin'ny fanatsarana ny fitoniana, ny fanamboarana bibikely ary maro hafa
Ny fanavaozana Inkscape 1.0.2 vaovao dia misy Ary amin'ity fanontana vaovao ity dia nilaza ireo mpandraharaha fa nifantoka tamin'ny fanatsarana ny fitoniana izy ireo, ary koa ny fanitsiana ireo lesoka, ho fanampin'izay ho an'ny kinova MacOS dia niasa izy ireo hanatsara ny fahombiazany.
Ho an'ireo izay tsy mahalala ny Inkscape dia tokony hahalala izany dia rindrambaiko sary sokajin-tsarimihetsika tsara kalitao matihanina Mandeha amin'ny Windows, Mac OS X, ary GNU / Linux io. Izy io dia ampiasain'ny matihanina amin'ny famolavolana sy ny fialam-boly manerantany hamoronana sary marobe, toy ny sary, sary masina, logo, kisary, sarintany, sary an-tsary.
Inkscape manana fitaovana manahirana be pitsiny manana fahaiza-manao mitovy amin'ny Adobe Illustrator, CorelDRAW, ary Xara Xtreme. Azonao atao ny manafatra sy manondrana endrika fisie isan-karazany, ao anatin'izany ny SVG, AI, EPS, PDF, PS, ary PNG.
Izy io dia manana singa napetraka feno, interface tsotra, fanohanana amin'ny fiteny maro, ary natao ho azo zahana, ny mpampiasa dia afaka manamboatra ny fampiasa Inkscape miaraka amin'ny plugins.
1 Inkscape 1.0.2 Fampisehoana vaovao lehibe
2 Ahoana ny fametrahana Inkscape 1.0.2 amin'ny Ubuntu sy ny derivatives?
Inkscape 1.0.2 Fampisehoana vaovao lehibe
Mandritra ny fanomanana ny kinova vaovao, snandinika manokana hanatsarana ny fitoniana sy hanafoanana ireo lesoka, ao anatin'izany ny famoahana lahatsoratra sy ny fanatsarana ny fampiasa ara-dalàna ny fitaovana famafana.
Ary koa, ny doka dia milaza fa nihatsara ny fampisehoana tamin'ny kinova macOS. Anisan'ireo fanavaozana napetraka, ny Fisehoana amin'ny fikirana safidy hanafoanana ny scaling amin'ny fipihana ny bokotra afovoany totozy ary mandrara ny fihodinan'ny canvas ho an'ny antontan-taratasy misaraka na ny windows rehetra.
Amin'izany fotoana izany, Ny fanandramana alpha dia nanomboka tamin'ny kinova vaovao manan-danja Inkscape 1.1, izay nanolotra efijery fandraisana an-trano ho an'ny rindranasa ary manolotra sehatr'asa fototra toy ny karazana canvas, lohahevitra, ary hotkey napetraka, ary koa ny lisitr'ireo fisie sy môdely nosokafana vao haingana hamoronana antontan-taratasy manana habe iray.
Ny fanavaozana hafa dia ahitana:
Fifaneraserana hikarohana ny toe-javatra arakaraka ny sarontava.
Rindrambaiko pop-up rehefa manindry "?" boaty fifanakalozan-kevitra hiditra amin'ny baiko izay ahafahanao miantso asa maro samihafa nefa tsy miditra amin'ny menio na manindry bokotra mafana.
Jery ​​Sketch Overlay izay mampiseho ny drafitra sy ny sary amin'ny fotoana iray
Ahoana ny fametrahana Inkscape 1.0.2 amin'ny Ubuntu sy ny derivatives?
Vantany vao vita ny fametrahana dia azonao atao ny mahita ny mpandefa fampiharana ao amin'ny menio fampiharana anao.
Ary farany ny iray amin'ireo fomba natolotry ny mpandrindra Inkscape mivantana dia mampiasa fisie AppImage izay azonao sintonina mivantana avy amin'ny tranokalan'ny fampiharana.
Amin'ny tranga misy an'ity kinova ity dia afaka manokatra terminal ianao ary ao anatiny no ahafahanao misintona ny endrik'ity kinova farany ity amin'ny fanoratana ity baiko manaraka ity ao aminy:
Na amin'ny fomba mitovy amin'ny fikitihana faharoa ny fisie sy ny fananana dia tsindrio eo amin'ilay efajoro hoe mihazakazaha programa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Software » Inkscape 1.0.2 dia miaraka amin'ny fanatsarana ny fitoniana, ny fanamboarana bibikely ary maro hafa
Inkscape no ampiasaiko satria ny vectorizer dia tsara kokoa noho ny fampiharana ara-barotra.
DokuWiki, ny fomba fametrahana an'ity fampiharana ity amin'ny Ubuntu 20.04
JingOS, fizarana miorina amin'ny Ubuntu ary aingam-panahy avy amin'ny iPadOS